Fitafiana Shirt Lamaody vita any Shina - Sina Shirt Sleeve Shirt Suppliers & Factory
Marika CHECKEDOUT Item Code CW181D0400E Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy dia fanamainty mpitaiza, akanjo fanamiana sy akanjo ho an'ny akanjo, akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny poleta 65/35 poly / landy GSM.146g Xinjiang Aksu vita amin'ny lava-paty, tsy mihetsiketsika, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dranomaso, life service in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, tsara abra ...
Akanjo fihazonan-damba fohy palitao miaraka amina paosy iray amin'ny tratra ankavia CW1109D115000AM
Marika CHECKEDOUT Item Code CW1109D115000AM Size S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny fanamainty, ny akanjo waitress, ny lobaka fohy, ny akanjo fanaovana ny hopitaly lamba 40/60 poly / cotton GSM.125g manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny fitrandrahana polyester dia corro ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW167D0181E Lehibe S-3XL Ny teny fototra dia fanamainty mpitaiza, fanamiana akanjo, akanjo lobaka fohy / akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny poloney 65/35 poly / cotton GSM.146g Xinjiang Aksu vita amin'ny landy lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dranomaso, ny asa fanompoana. in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, goo ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW167D0401E Lehibe S-3XL Ny teny fototra dia fanamainty mpitaiza, fanamiana mientanentana, akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny poleta 65/35 poly / landy GSM.146g Xinjiang Aksu vita amin'ny lava-paty, tsy-pilling, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dranomaso, life service in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, goo ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW181D0100E Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy fanamoriana milomano, fanamiana akanjo, ny akanjo vita amin'ny akanjo, ny akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny poleta 65/35 poly / landy GSM.146g Xinjiang Aksu vita amin'ny lava-paty, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dranomaso, life service in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, tsara abra ...
GRAY Polyester Cotton Classic Short Sleeve Slim fit waitress fanamiana CW185D5901H
Marika CHECKEDOUT Item Code CW185D5901H Ferana S-3XL Ny teny fanalahidy dia fanamainty mpitaiza, fanamiana mientanentana, akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny poleta 65/35 poloney / landihazo Xinjiang Aksu vita amin'ny landy lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-tsaboina, fotoam-panompoana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, tsara abrasio ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW195D5800H Ukra S-3XL Teny fanalahidy fanamainty, fanamiana akanjo, akanjo lobaka fohy, lobaka fohy, akanjo fitondra miloko 65/35 poly / cotton Xinjiang Aksu vita amin'ny landy lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dranomaso, life service in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny ranjony avo ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW195D8400H Ukra S-3XL Teny fanalahidy fanamoriana milomano, fanamiana akanjo, fehin-trandraka fohy, lobaka fohy, akanjo fitondra miloko 65/35 poly / cotton Xinjiang Aksu vita amin'ny landy lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-damba, fiainana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, goo ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW1056D154000H habe S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny fanamainty, ny fanamiana akanjo, ny lobaka fohy, ny akanjom-bavy lamba lamba 100% POLY manjaitra Thread Polyester kambana koa dia antsoina hoe kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miolakolaka, resistan ...